Udonga lwangaphakathi nolwangaphandle lombhobho wentsimbi lunokuchaneka okuphezulu kunye nokugqiba okuphezulu. Emva konyango lobushushu, umbhobho wentsimbi awunalo ugcino lwe-oxidation, kwaye udonga lwangaphakathi lunokucoceka okuphezulu. Umbhobho wentsimbi uthwala uxinzelelo oluphezulu, awukhubeki ekugobeni okubandayo, kwaye awunangqhekeka evuthayo kunye neflethi.Umbala wetyhubhu yentsimbi: umbala omhlophe ngokuqaqamba, ngokuqaqamba kwesinyithi.
3.Eyona njongo iphambili
Emva kokucima ulwakhiwo lwe-martensite, ityhubhu eqaqambileyo ethe tyaba yafakwa kumgangatho wobushushu we-450 ~ 600 ℃ .Okanye kwi-650 ℃ emva kokubila kwinqanaba lokupholisa ngokucothayo emva kwe-350 ~ 600 Or; Okanye emva kokudinwa kwi-650 ℃, ukufudumeza ixesha elide kuluhlu lobushushu lwama-350 ~ 650 ℃ lwenza ukuba kube nokugqwesa umbhobho oqaqambileyo. Ukuba i-20 # umbhobho wentsimbi ochanekileyo uyayifudumeza iye kwi-650 ℃ kwaye emva koko iphole ngokukhawuleza, inokubuyisela ubulukhuni, ke ikwabizwa ngokuba yi% 26ldquo; Ubushushu bomsindo obuguquliweyo% 26rdquo; Ubungqindilili beqondo lobushushu obuphezulu kukuqina kokuqaqamba okuthe ngqo ityhubhu kunye nokunyuka kobushushu bokutshintsha kobushushu.Ukuphakama kobushushu beqondo lobushushu.Ubuntununtunu buchazwa njengomahluko phakathi kweqondo lokutshintsha kwe-ductile kunye nobushushu (% 26Delta; T) ukubonisa ukuba ukuphakama kobushushu obuphezulu obuphezulu, kokuphakama kwenani ukwaphuka kwamanqwanqwa kukwaphuka kwetyhubhu eqaqambileyo echanekileyo.
Iziphumo zezinto kwityhubhu eqaqambileyo eqaqambileyo kwiqondo lobushushu eliphezulu lokuqaqamba kobushushu kwahlulwe kwaba 1) izinto zokungahlambuluki ezifana ne-phosphorus, i-tin, i-antimony, njalo njalo, ebangela ukuba ubushushu obuphezulu bobushushu betyhubhu eqaqambileyo echanekileyo. (2) Izinto zokudibanisa izinto ezikhuthaza okanye ezicothisa ubushushu obuphezulu bobushushu kwiifom ezahlukeneyo nakwiidigri ezahlukeneyo I-chromium, i-manganese, i-nickel, i-silicon, njalo njalo, idlala indima yokukhuthaza, ngelixa i-molybdenum, i-tungsten, i-titanium njalo njalo idlala indima yokulibaziseka.Ikhabhoni nayo idlala indima yokuthintela. isidanga se-alloy okanye i-multicomponent alloy steels equkethe i-chromium, i-manganese, i-nickel kunye ne-silicon yahlukile ngohlobo kunye nomxholo wezinto zokudibanisa izinto.
Ubungakanani beqondo lobushushu obuphezulu kunye nokuqaqamba kwetyhubhu eqaqambileyo ngokubanzi kukholelwa ukuba sisiphumo sokwamkelwa komda wokutya okuziinkozo okubangelwe lucalucalulo lwezinto ezingahlambulukanga ezinje nge-P, Sn, Sb kunye ne-As kumda wokuqala wokutya okuziinkozo. , i-nickel, i-chromium kunye nezinye izinto ezinento yokwenza nokungahlambuluki kwezi zinto zingasentla zenzeka kumda wokutya okuziinkozo, okhuthaza ukutyeba kwezinto ezingafunekiyo kunye nokukhawulezisa ukwamkelwa.Ngokwahlukileyo koko, i-molybdenum inonxibelelwano olomeleleyo nezinto ezingcolileyo ezinje nge-phosphorus, enokuvelisa ukucutha isigaba kwingqolowa kunye nokuthintela ukwahlulwa komda weenkozo ze-phosphorus, kwaye kunokunciphisa izinto ezinqabileyo zomhlaba ezinamaqondo obushushu aphezulu.Ti inokukhuthaza ngokufanelekileyo ngakumbi ukugcwala kwezinto ezingcolileyo ezifana ne-phosphorus kwingqolowa, ngaloo ndlela buthathaka ulwahlulo lomda wokutya okuziinkozo Izinto zokungahlambuluki kunye nokunciphisa isantya sobushushu obushushu obuphezulu.
Ubume bokunikezelwa kwezixhobo ezisemgangathweni